Wararka - Sida loo doorto dayactirka hore ama gadaal ee muuqaalkaaga hogaaminaya.
Sida loo doorto dayactirka hore ama gadaal ee muuqaalkaaga hogaaminaya.
Hababka dayactirka ee muujinta hogaamintu badanaa waxay u qaybsan yihiin dayactirka hore iyo dib-u-hagaajinta.
Dib-u-hagaajin loo isticmaalo shaashadda LED-ka ee dhismaha darbiyada dibedda, waa in loogu talagalay dhinaca dambe ee dariiqa si qofku ugu sameeyo dayactir iyo dib-u-hagaajin xagga dambe ee shaashadda jirka.
Hubso in caddeynta biyaha si fiican ugu filan deegaanka banaanka, muuqaalka gadaal dayactirka ayaa sidoo kale u baahan astaan ​​aluminium ah oo ku xeeran si loo hubiyo inaysan biyo ku dhicin shaashadda la qabtay, taasoo heerkeedu gaarsiisan yahay IP65.
Shuruudaha guud ee farsamo waa sareeyaan, rakibaadda iyo ka saaristuba waa culeys, iyo waqti badan.
Sidoo kale, muujinta banaanka ee hogaaminta, YWTLED waxay soo saartay laba dariiqo oo loogu talagalay bandhigga banaanka hore ee dayactirka.
Hal xal oo loogu talagalay dayactirka hore waa wareejinta wareejinta qaabdhismeedka 'pixel p3.91, p4.81, p5.33, p6.67, p8, p10, p16, oo heerka caddeynta banaanka horeba u dhigma IP65.
Dib-u-habeynta labaad ee hore waa bannaanka hoggaanka sare ee soo bandhigida xalka furan.
Albaabka albaabka furan oo leh ul haydarool leh oo isku dhafan dhammaan qaybaha la soo bandhigay.
Dayactirka hore, shaashadda leedhka ah waxaa loo qaabeyn karaa mid aad u khafiif ah oo fudud, laguna dhex dari karaa deegaanka ku hareereysan, lagu gaari karaa muuqaal u dhigma.
Qaar ka mid ah meelaha gudaha ah gaar ahaan meelaha is haysta, ama rakibidda darbiga, sida iska cad, ma ahan xulasho wanaagsan oo dayactir gadaal ah.
Iyadoo ay weheliso tiknoolajiyada muuqaalka 'Display Pixel Pitch LED Display' oo la sameeyay, muuqaalka dayactirka hore ee gudaha gudaha ayaa si tartiib tartiib ah u qabsaday suuqa.
Waxaa loo qaabeeyey magnet si loo hagaajiyo cutubka golaha ama qaab dhismeedka birta. Ka fur dhammaan golaha wasiirada ama modululada dhinaca hore, Markaad kala daadineyso, Dhuuq nuuguhu wuxuu si toos ah u taabanayaa dusha qaybta dusha sare ee dayactirka hore,
Marka la barbardhigo dib-u-hagaajinta, faa'iidada shaashadda dayactirka hore ee LED-ka ayaa badiyaa badbaadiya booska iyo qaabdhismeedka taageerada, kor u qaadista ka faa'iideysiga booska iyo yareynta dhibaatada ka dambeysa shaqada iibka ka dib.
Habka dayactirka hore uma baahna waddo, wuxuu taageeraa dayactirka hore ee madaxa-bannaan, wuxuuna keydiyaa booska shaashadda gadaashiisa.
Looma baahna in la kala furfuro fiilada, waxay taageertaa shaqada dayactirka degdega ah, marka la barbardhigo dayactirka dhabarka, oo u baahan in laga saaro boolal badan marka hore si loo kala furfuro qeybta hore ee dayactirka waa mid ka fudud oo ka sahlan. Si kastaba ha noqotee, qolka oo kooban awgeed, qaabdhismeedka wuxuu leeyahay shuruudo sare oo ku saabsan kuleylka kuleylka golaha wasiirada, haddii kale shaashaddu way u fududahay guul darrooyinka.
Dhinaca kale, dib-u-hagaajinta waxay leedahay faa iido u gaar ah.
Qiimo hoose, kuleyl wanaagsan oo sii deynaya, kaas oo aad ugu habboon saqafka, safka iyo munaasabadaha kale, oo leh kormeer iyo waxtarka dayactirka.
Codsi kaladuwan awgood, waxaad ku dooran kartaa labadan hab ee dayactirka sida waafaqsan baahiyahaaga.